Elu àgwà tapered ala mmeputa Manufacturers na Suppliers | China High quality tapered ala mmewere Factory
Tapered ala biarin na-ezo aka radial kpaliri Rolling biarin na tapered rollers. E nwere ụdị abụọ: obere cone angle na nnukwu cone angle. Obere cone n'akuku tumadi ebu mkpokọta radial na axial ibu dabere na radial ibu. A na-ejikarị ya eme ihe abụọ ma gbanwee nwụnye. Enwere ike itinye agbụrụ dị n'ime na mpụga iche. Enwere ike idozi radial na axial ikpochapu n'oge ntinye na ojiji; Nnukwu akwara taper bụ isi na-ebu axial na radial ibu dabere na axial ibu. N'ozuzu, anaghị eji ya ebu ibu axial dị ọcha naanị, mana enwere ike iji ya buru ibu radial dị ọcha mgbe ahazi ya abụọ (njedebe nke otu aha ahụ arụnyere na ibe ya).
Ihe yiri mgbaaka dị n'ime na nke mpụga nwere ụzọ ndị awara awara, e nwekwara ahịhịa ndị nwere ụyọkọ n'etiti ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na agbatị elu ya dị larịị, ọ ga-emecha jikọta ọnụ n'otu ebe na agba ya. A na-ejikarị agba nrịbọnye etinyere ebu radial na ibu axial, tumadi radial ibu. A na-ekpebi ikike axial na-ebu ikike nke na-ebu ya site na kọntaktị kọntaktị, nnukwu mpi antenna ahụ, nke ka ukwuu na-ebu ibu ọrụ axial. Ihe nkedo a na-agba agba dị iche iche. Ogige dị n'ime ya na rollers na onu mejupụtara mpaghara dị n'ime, nke enwere ike itinye ya iche na mgbanaka mpụga. Ofdị nke a nwere ike ịkwụsị mmachi axial nke otu akụkụ nke osisi ma ọ bụ ụlọ ahụ, ma ghara ikwe ka shaft ahụ gbadaa na oghere ụlọ. N'okpuru ọrụ nke radial ibu, a ga-eme ike axial ọzọ. Ya mere, n'ozuzu na biarin abụọ nke agba ahụ, mgbanaka dị n'èzí na mgbanaka dị n'ime nke agba ahụ ka arụnyere na ihu ihu ọ bụla.
Ikike nke otu-ahịhịa tapered biarin ibu axial ibu na-adabere na kọntaktị n'akuku, ya bụ, ná mpụga mgbanaka raceway n'akuku. Oke nkuku, nke ka ukwuu ibu ọrụ axial. The kasị eji tapered ala biarin bụ otu n'usoro tapered ala biarin. N'ihu ihu igwe nke ụgbọ ala ahụ, a na-eji obere agba nwere okpukpu abụọ nke nwere okpukpu abụọ. A na-eji mpempe akwụkwọ mpịakọta agba anọ na igwe dị arọ dịka igwe igwe na-agba agba ma na-ekpo ọkụ.
Taper ala agba Ndokwa, Nrụgide oru Roller biarin, Inch Single Ahịrị, Ala Pin biarin, Self-kwado Ball agba, Full Complement Ball biarin,